အသက် ၁၂၈နှစ်တိုင် နေနေရပေမယ့် တစ်ရက်မှမပျော်ပါဘူးဆိုတဲ့ အဖွား…….
May 18, 2018 By Buzz Myanmar News in နိုင်ငံတကာ Tags: Koku, ဂင်းနစ်, အသက်
ကမ္ဘာ့အသက်ကြီးဆုံး အဖွားအိုကြီး လို့ ယူဆခြင်းခံထားရတဲ့ အသက်(၁၂၈)နှစ်အရွယ် ရုရှားနိုင်ငံသူအဖွားအိုကြီးဟာ ဒီအသက်ဒီအရွယ်ကိုသာ ရောက်လာခဲ့ပေမယ့် သူမအနေနဲ့ တစ်ရက်မှ မပျော်ခဲ့ရပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ သူမအနေနဲ့ အသက်ရှည်ခြင်းဟာ ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ဖို့ထက် အရွယ်ကောင်းစဉ်ကတော့ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ငါသေသွားရင် ကောင်းမှာပဲလို့ ထင်မြင်မိတယ်လို့ သူမက ပြောပါတယ်။
အဖွား ရဲ့နာမည်ကတော့ Koku Istambulova ဖြစ်ပြီး သူမရဲ့လက်ရှိအသက်အရွယ်ဟာ ကမ္ဘာ့အသက်ကြီးဆုံးအဖြစ် ဂင်းနစ် မှတ်တမ်း ဝင်ဖွယ်ရာ ရှိပေမယ့် သူမမှာ ရုရှားအစိုးရက တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ မှတ်ပုံတင်လေးသာ ပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူမရဲ့ မွေးရပ်ဟာ (၁၈၈၉) ဇွန်လ(၁)ရက် ဖြစ်ပြီး အစိုးရက တရားဝင်အသိအမှတ် ပြုထားပါတယ်။
အဖွား Koku ဟာ Chechnya ပြည်နယ် က ရွာလေးတစ်ရွာမှာ နေထိုင်ပြီး လက်ရှိအချိန်ထိတော့ သူမအတွက် အသက်ရှည်ခြင်းဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာလို့ မယူဆပဲ ဝဋ်ခံဖို့သက်သက် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတယ်လို့ သူမက ညည်းတွားခဲ့ပါတယ်။ အဖွားဟာ အိုကြီးအိုမအရွယ် ရောက်နေပေမယ့် စကားတွေကို ပီပြင်စွာပြောနိုင်ပါသေးတယ်။
အဖွား Koku က ” ဒီအသက်အရွယ်သာ ရောက်လာတယ် တစ်ရက်မှ ပျော်ခဲ့ရတယ်တော့ မရှိပါဘူး … နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အလုပ်တွေ ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်ရတယ် … ဥယျာဉ်ထဲမှာ မြေတူးမြေဆွ လုပ်နေရတယ် … ကျွန်မ အလွန်ကို မောပန်းနေပါပြီ … အသက်ရှည်ခြင်းဆိုတာ ဘုရားသခင်ရဲ့ မေတ္တာလက်ဆောင် မဟုတ်ပါဘူး … ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်း သက်သက်ပါ … “လို့ ပြောပါတယ်။
အဖွားက ဆက်လက်ပြီး ” အို ကျွန်မဘဝရဲ့ ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့ နေ့စွဲတွေကို ပြန်သာကြည့်လိုက် … ကျွန်မ အတော်ငယ်ငယ်တုန်းက သိပ်ကို ပင်ပန်းလွန်းလို့ ငါ သေသွားရင် ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးခဲ့မိတာပဲ … တကယ်တော့ အခုအချိန်က ရှင်သန်နေတဲ့ အချိန်မဟုတ်ပါဘူး … ကျွန်မအတွက် ဒရွတ်တိုက်စွဲနေရတဲ့ ဘဝပါ “လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဆိုဗီယက်ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဂျိုးဇက်စတာလင် (Famous)
အဖွား Koku ဟာ သားသမီးတွေအကုန်လုံး ဆုံးပါးခဲ့ပေမယ့် နောက်ဆုံးကျန်ရှိတဲ့ သမီးကြီး Tamara ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့(၅)နှစ်က သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ သမီးကြီး Tamara ကိုယ်တိုင်ကလည်း အသက်(၁၀၄)နှစ်အထိ နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ အဖွား Koku ကတော့ သူမအနေနဲ့ ဒီလိုအသက်ရှည်ရခြင်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ဆိုပြီး သူမမှာ မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူမက ဒိန်ချဉ်ကို အလွန်ကြိုက်နှစ်သက်ပြီး အသားနဲ့စွပ်ပြုတ်ကိုတော့ လုံးဝမသုံးဆောင်ကြောင်း၊ ဒါတွေက သူမကို အသက်ရှည်အောင်အထောက်အပံ့ပေးခဲ့တာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သာ ရိုးရိုးသားသား ပြောပါတယ်။ သူမကတော့ အသက်ရှည်ဖို့ဆိုပြီး တမင်တကာ တစ်ခြားဘာကိုမှမလုပ်ဖူးကြောင်း ဆိုပါတယ်။ အဖွား Koku ဟာ ရုရှားပြည်တွင်းစစ်အတွင်း၊ ဗိုရှီဗစ်တော်လှန်ရေးအတွင်း၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နဲ့၊ ချီချန်စစ်ပွဲတွေအတွင်းမှာ အသက်ဘေးက ရုန်းကန်ခဲ့ရသူပါ။
ဒါ့အပြင် ရုရှားခေါင်းဆောင်ကြီး စတာလင်ရဲ့ ပြင်နှင်ဒဏ်ပေးတာကို အဖွား Koku တို့လည်း ခံခဲ့ရပြီး ထိုစဉ်က ဆိုက်ဘေးရီးယားဘက်မှာ ခက်ခဲစွာရှင်သန်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ရကြောင်း၊ နောက် ကာဇက်စတန်မှာ ပုန်းခိုနေရတဲ့အခါမှာ သူမတို့ရုရှားတွေကို ကာဇက်စတန်တွေ ဘယ်လောက်မုန်းတီးသလဲဆိုတာကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ခံစားခဲ့ရပြီး ဒီအချိန်အထိ အသက်ရှည်တာ အလွန်အံ့သြစရာကောင်းတယ်လို့ အဖွားက ပြောပါတယ်
ကာဇက်စတန်မှာ တိမ်းရှောင်နေစဉ် နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ရုရှားကိုလွမ်းလွန်းလို့ ညတိုင်းငိုခဲ့ရကြောင်း၊ သူမအတွက် ရှားပါးတဲ့ပျော်စရာနေ့စွဲတွေကတော့ ပြည်တော်ပြန်ခရီးဖြစ်ပြီး၊ နေရောင်ခြည်ဖြာဖြာ ကောင်းကင်အောက်က သူမရဲ့ အိမ်ကလေးရှေ့က ခုံတန်းလျှားလေးမှာ အေးအေးလူလူထိုင်နေရတာကို သဘောကျတယ်လို့ အဖွားက ဝေ့သီနေတဲ့မျက်ဝန်းစတွေနဲ့ ပြောပါတယ်။
လက်ရှိအသက်အကြီးဆုံးအဖွားအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသူမှာ ဂျပန်အဖွားအို ချီယိုမီယာကို ဖြစ်ပြီး၊ သူမကတော့ (၁၁၇)နှစ်ပါ။ ကမ္ဘာအသက်ကြီးဆုံးအဖြစ် စံချိန်တင်နေထိုင်နိုင်ခဲ့သူကတော့ ပြင်သစ်လူမျိုး Jeanne Calment ဖြစ်ကြောင်း သိရပြီး သူမကတော့ အသက် (၁၂၂)နှစ်၊ (၁၆၄)ရက်နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ သူမဟာ (၁၉၉၇)ခုနှစ်မှာ သေဆုံးသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အသကျ ၁၂၈နှဈတိုငျ နနေရေပမေယျ့ တဈရကျမှမပြျောပါဘူးဆိုတဲ့ အဖှား…….
ကမ်ဘာ့အသကျကွီးဆုံး အဖှားအိုကွီးလို့ ယူဆခွငျးခံထားရတဲ့ အသကျ(၁၂၈)နှဈအရှယျ ရုရှားနိုငျငံသူအဖှားအိုကွီးဟာ ဒီအသကျဒီအရှယျကိုသာ ရောကျလာခဲ့ပမေယျ့ သူမအနနေဲ့ တဈရကျမှ မပြျောခဲ့ရပါဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။ သူမအနနေဲ့ အသကျရှညျခွငျးဟာ ကောငျးတယျမကောငျးဘူးဆိုတာ ဆုံးဖွတျဖို့ထကျ အရှယျကောငျးစဉျကတော့ နစေ့ဉျနဲ့အမြှ ငါသသှေားရငျ ကောငျးမှာပဲလို့ ထငျမွငျမိတယျလို့ သူမက ပွောပါတယျ။
အဖှားရဲ့နာမညျကတော့ Koku Istambulova ဖွဈပွီး သူမရဲ့လကျရှိအသကျအရှယျဟာ ကမ်ဘာ့အသကျကွီးဆုံးအဖွဈ ဂငျးနဈမှတျတမျးဝငျဖှယျရာ ရှိပမေယျ့ သူမမှာ ရုရှားအစိုးရက တရားဝငျအသိအမှတျပွုထားတဲ့ မှတျပုံတငျလေးသာ ပိုငျဆိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ သူမရဲ့ မှေးရပျဟာ (၁၈၈၉) ဇှနျလ(၁)ရကျ ဖွဈပွီး အစိုးရက တရားဝငျအသိအမှတျ ပွုထားပါတယျ။
အဖှား Koku ဟာ Chechnya ပွညျနယျက ရှာလေးတဈရှာမှာ နထေိုငျပွီး လကျရှိအခြိနျထိတော့ သူမအတှကျ အသကျရှညျခွငျးဟာ ဘုရားသခငျရဲ့ကောငျးခြီးမင်ျဂလာလို့ မယူဆပဲ ဝဋျခံဖို့သကျသကျ ပွဈဒဏျခမြှတျခံထားရတယျလို့ သူမက ညညျးတှားခဲ့ပါတယျ။ အဖှားဟာ အိုကွီးအိုမအရှယျ ရောကျနပေမေယျ့ စကားတှကေို ပီပွငျစှာပွောနိုငျပါသေးတယျ။
အဖှား Koku က ” ဒီအသကျအရှယျသာ ရောကျလာတယျ တဈရကျမှ ပြျောခဲ့ရတယျတော့ မရှိပါဘူး … နစေ့ဉျနဲ့အမြှ အလုပျတှေ ပငျပငျပနျးပနျး လုပျရတယျ … ဥယြာဉျထဲမှာ မွတေူးမွဆှေ လုပျနရေတယျ … ကြှနျမ အလှနျကို မောပနျးနပေါပွီ … အသကျရှညျခွငျးဆိုတာ ဘုရားသခငျရဲ့ မတ်ေတာလကျဆောငျ မဟုတျပါဘူး … ပွဈဒဏျခတျခွငျး သကျသကျပါ … “လို့ ပွောပါတယျ။
အဖှားက ဆကျလကျပွီး ” အို ကြှနျမဘဝရဲ့ ကုနျလှနျခဲ့တဲ့ နစှေဲ့တှကေို ပွနျသာကွညျ့လိုကျ … ကြှနျမ အတျောငယျငယျတုနျးက သိပျကို ပငျပနျးလှနျးလို့ ငါ သသှေားရငျ ကောငျးမှာပဲလို့ တှေးခဲ့မိတာပဲ … တကယျတော့ အခုအခြိနျက ရှငျသနျနတေဲ့ အခြိနျမဟုတျပါဘူး … ကြှနျမအတှကျ ဒရှတျတိုကျစှဲနရေတဲ့ ဘဝပါ “လို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။
ဆိုဗီယကျခေါငျးဆောငျဟောငျး ဂြိုးဇကျစတာလငျ (Famous)
အဖှား Koku ဟာ သားသမီးတှအေကုနျလုံး ဆုံးပါးခဲ့ပမေယျ့ နောကျဆုံးကနျြရှိတဲ့ သမီးကွီး Tamara ကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့(၅)နှဈက သဆေုံးသှားခဲ့ပါတယျ။ သမီးကွီး Tamara ကိုယျတိုငျကလညျး အသကျ(၁၀၄)နှဈအထိ နထေိုငျခဲ့ရပါတယျ။ အဖှား Koku ကတော့ သူမအနနေဲ့ ဒီလိုအသကျရှညျရခွငျးရဲ့လြှို့ဝှကျခကျြဆိုပွီး သူမမှာ မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ သူမက ဒိနျခဉျြကို အလှနျကွိုကျနှဈသကျပွီး အသားနဲ့စှပျပွုတျကိုတော့ လုံးဝမသုံးဆောငျကွောငျး၊ ဒါတှကေ သူမကို အသကျရှညျအောငျအထောကျအပံ့ပေးခဲ့တာ ဖွဈနိုငျတယျလို့သာ ရိုးရိုးသားသား ပွောပါတယျ။ သူမကတော့ အသကျရှညျဖို့ဆိုပွီး တမငျတကာ တဈခွားဘာကိုမှမလုပျဖူးကွောငျး ဆိုပါတယျ။ အဖှား Koku ဟာ ရုရှားပွညျတှငျးစဈအတှငျး၊ ဗိုရှီဗဈတျောလှနျရေးအတှငျး၊ ဒုတိယကမ်ဘာစဈနဲ့၊ ခြီခနျြစဈပှဲတှအေတှငျးမှာ အသကျဘေးက ရုနျးကနျခဲ့ရသူပါ။
ဒါ့အပွငျ ရုရှားခေါငျးဆောငျကွီး စတာလငျရဲ့ ပွငျနှငျဒဏျပေးတာကို အဖှား Koku တို့လညျး ခံခဲ့ရပွီး ထိုစဉျက ဆိုကျဘေးရီးယားဘကျမှာ ခကျခဲစှာရှငျသနျဖို့ ကွိုးစားခဲ့ရကွောငျး၊ နောကျ ကာဇကျစတနျမှာ ပုနျးခိုနရေတဲ့အခါမှာ သူမတို့ရုရှားတှကေို ကာဇကျစတနျတှေ ဘယျလောကျမုနျးတီးသလဲဆိုတာကို မကျြမွငျကိုယျတှေ့ ခံစားခဲ့ရပွီး ဒီအခြိနျအထိ အသကျရှညျတာ အလှနျအံ့သွစရာကောငျးတယျလို့ အဖှားက ပွောပါတယျ
ကာဇကျစတနျမှာ တိမျးရှောငျနစေဉျ နစေ့ဉျနဲ့အမြှ ရုရှားကိုလှမျးလှနျးလို့ ညတိုငျးငိုခဲ့ရကွောငျး၊ သူမအတှကျ ရှားပါးတဲ့ပြျောစရာနစှေဲ့တှကေတော့ ပွညျတျောပွနျခရီးဖွဈပွီး၊ နရေောငျခွညျဖွာဖွာ ကောငျးကငျအောကျက သူမရဲ့ အိမျကလေးရှကေ့ ခုံတနျးလြှားလေးမှာ အေးအေးလူလူထိုငျနရေတာကို သဘောကတြယျလို့ အဖှားက ဝသေီ့နတေဲ့မကျြဝနျးစတှနေဲ့ ပွောပါတယျ။
လကျရှိအသကျအကွီးဆုံးအဖှားအဖွဈ သတျမှတျခံထားရသူမှာ ဂပြနျအဖှားအို ခြီယိုမီယာကို ဖွဈပွီး၊ သူမကတော့ (၁၁၇)နှဈပါ။ ကမ်ဘာအသကျကွီးဆုံးအဖွဈ စံခြိနျတငျနထေိုငျနိုငျခဲ့သူကတော့ ပွငျသဈလူမြိုး Jeanne Calment ဖွဈကွောငျး သိရပွီး သူမကတော့ အသကျ (၁၂၂)နှဈ၊ (၁၆၄)ရကျနထေိုငျခဲ့ရပါတယျ။ သူမဟာ (၁၉၉၇)ခုနှဈမှာ သဆေုံးသှားခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ။